दयाहाङ र सौगातले ‘फन्को’ले ताने दर्शक ? « Mazzako Online
दयाहाङ र सौगातले ‘फन्को’ले ताने दर्शक ?
मल्टिप्लेक्समा चलेका कलाकार भनिएको अभिनेता दयाहाङ राई र सौगात मल्लको अभिनय रहेको फिल्म ‘फन्को’ शुक्रबारबाट हलमा लाग्यो । शुक्रबार माघे संक्रान्ती र शनिबार २ दिन बिदा हुँदा के यो फिल्मले यसको सदुपयोग गर्‍यो त ?
फिल्मका निर्माता तथा वितरक नरेन्द्र महर्जनले फिल्मले २ दिनमा ५६ लाखको ग्रस कलेक्शन गरेको जानकारी दिएका छन् । यो २ दिनको बिदामा उच्च प्रचार गरिएको र स्टार भनिएका कलाकारले अभिनय गरेको फिल्मका लागि सुखद होइन । तर, निर्माता महर्जन मल्टिप्लेक्समा राम्रो र सिंगलमा सोचे जस्तो व्यापार नभएको बताउँछन् ।
फिल्मले माघ १ गते काठमाण्डौमा १५ लाख ६९ हजार ४ रुपैयाँ र काठमाण्डौ बाहिर १२ लाख ९१ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । पहिलो दिन फिल्मले देशभरबाट २८ लाख ६० हजार ७४२ रुपैयाँ कमाएको छ ।
यस्तै, शनिबार फिल्मले काठमाण्डौमा १६ लाख ५५ हजार ४ सय २२ रुपैयाँ र काठमाणडौ बाहिर ११ लाख ११ हजार २ सय ५७ रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । दोश्रो दिन फिल्मले देशभरबाट २७ लाख ६६ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । काठमाण्डौमा १८ र काठमाण्डौ बाहिर ६५ वटा पर्दामा यो फिल्म रिलिज भएको छ ।
जसअनुसार २ दिनको बिदामा यो फिल्मले ५६ लाख २७ हजार ४ सय ५ रुपैयाँको व्यापार गरेको वितरक कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
सुवर्ण थापाले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, सौगात मल्ल, केकी अधिकारी मुख्य भूमिकामा छन् ।